ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ VAR စနစ် ကျင့်သုံးဖို့ လိုနေပြီလား
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ VAR စနစ် ကျင့်သုံးဖို့ လိုနေပြီလား
27 Aug 2018 . 2:32 PM
ရုပ်သံအကူဒိုင်စနစ် (VAR)ဆိုတာက ဘောလုံးလောကမှာ အငြင်းပွားစရာ သွင်းဂိုးတွေ၊ ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေ၊ လူမှားယွင်း အရေးယူခံရမှုတွေ မဖြစ်အောင် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA)က ဖန်တီးခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို၊ အားပေးထောက်ခံမှုတွေလည်း ရရှိခဲ့တယ်။
VAR စနစ်ကို ဝေဖန်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲရှိပါစေ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ ဘွန်ဒစ်လီဂါ စတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သလို ပြင်သစ်လိဂ်ဖလား၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက FA ဖလား ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ Technology ထက် လူသားစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးတဲ့ UEFA တောင် အခုရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်က စပြီး VAR စနစ် အသုံးပြုတော့မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ မြင်တွေ့လာရပြီ။
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရော VAR စနစ်လိုနေပြီလား။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ စကူဒါမိုး Scudamore ကတော့ VAR စနစ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မဖြစ်မနေ ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် ဒီရာသီမှာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်စတင်တာ ပွဲစဉ်(၃)ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ Controversial ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ ဆက်တိုက် ထွက်လာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် (၃) ၀ုလ်ဗ်-မန်စီးတီးတို့ တစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက ၀ုလ်ဗ်အသင်းနောက်ခံလူ ဘိုလီ Boly ရဲ့ဂိုးက ဘောလုံးကို သိသိသာသာ လက်နဲ့ပုတ်ပြီး သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဒိုင်လူကြီးက ဂိုးပေးခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ မသိသာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်သံပြကွက်တွေ ပြန်ကြည့်ရင် တော်တော်လေးကို ထင်ရှားတယ်။ တကယ်လို့ VAR စနစ်သာရှိမယ်ဆိုရင် ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဂိုးအဖြစ် ပေးပါ့မလား။
အဲဒီပွဲမှာပဲ မန်စီးတီးကွင်းလယ် တိုက်စစ်ကစားသမား ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva ကို ၀ုလ်ဗ်ကစားသမားတစ်ဦး ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲမှာ သိသိသာသာကို ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒိုင်လူကြီးက ပယ်နယ်တီ မပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီပွဲအပြီးမှာ VAR စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်နေပြီလို့ တောင်းဆိုသံတွေ ထွက်လာတော့တာပဲ။ အဲဒီပွဲအပြီး နောက်တစ်နေ့(တနင်္ဂနွေ)မှာ နယူးကာဆယ်-ချယ်လ်ဆီးပွဲ ကစားပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီး ရရှိခဲ့တဲ့ ပယ်နယ်တီက အငြင်းပွားစရာဆိုပြီး နောက်ခံစကားပြော Commentator တွေက သုံးသပ်ခဲ့တယ်။ ရုပ်သံပြကွက်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း နယူးကာဆယ်နောက်ခံလူ ဖေဘီယန်ရှား Fabian Schar ဟာ ဘောလုံးကို ရည်ရွယ်ဖျက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူကို မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပြီး နယူးကာဆယ်ဘက်က သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကလည်း အငြင်းပွားစရာပါပဲ။ နယူးကာဆယ် နောက်ခံလူ ယက်ဒ်လင် Yedlin ဟာ ချယ်လ်ဆီးတိုက်စစ်မှူး ဂျရူး Giroud ရဲ့ မျက်နှာကို တံတောင်နဲ့ သိသိသာသာ ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်လူကြီးက ပြစ်ဒဏ်ဘော မပေးခဲ့လို့ ယက်ဒ်လင်က ဂိုးရှေ့ဖြတ်တင်၊ အဲဒီဘောလုံးကို ဟိုဆေးလူ Joselu က ခေါင်းတိုက် သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ အခုမှ ရာသီအစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ ရှိလာပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ VAR ကို ဒီရာသီမှာ အသုံးမပြုသေးဖူးလို့ ဆိုထားလို့ နောက်ထပ် အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ရပ်တွေက ဆက်ဖြစ်လာဦးမှာပါပဲ။ VAR ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မဖြစ်မနေ အသုံးပြုဖို့ လိုနေပြီလို့ ယတိပြတ်ပြောလို့မရသေးပေမယ့် Controversial ဖြစ်ရပ်တွေ နောက်ထပ် မရှိလာနိုင်ဖို့အတွက် VAR လိုအပ်ပါတယ်လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . . .
Photo:New York Red Bulls,.nyunews.com,Dream Team,football-tribe.com
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ VAR စနဈ ကငျြ့သုံးဖို့ လိုနပွေီလား
ရုပျသံအကူဒိုငျစနဈ (VAR)ဆိုတာက ဘောလုံးလောကမှာ အငွငျးပှားစရာ သှငျးဂိုးတှေ၊ ပွဈဒဏျဘောတှေ၊ လူမှားယှငျး အရေးယူခံရမှုတှေ မဖွဈအောငျ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (FIFA)က ဖနျတီးခဲ့တဲ့ နညျးစနဈတဈခုပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြ့သုံးခဲ့ပွီး ဝဖေနျမှုတှေ ရှိခဲ့သလို၊ အားပေးထောကျခံမှုတှလေညျး ရရှိခဲ့တယျ။
VAR စနဈကို ဝဖေနျမှုတှေ ဘယျလိုပဲရှိပါစေ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ ဘှနျဒဈလီဂါ စတဲ့ပွိုငျပှဲတှမှော အသုံးပွုနပွေီဖွဈသလို ပွငျသဈလိဂျဖလား၊ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက FA ဖလား ပွိုငျပှဲတှမှောလညျး အသုံးပွုခဲ့ကွတယျ။ Technology ထကျ လူသားစှမျးဆောငျရညျကို ပိုနှဈသကျပါတယျလို့ ကွှေးကွျောခဲ့ဖူးတဲ့ UEFA တောငျ အခုရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ ကှာတားဖိုငျနယျက စပွီး VAR စနဈ အသုံးပွုတော့မယျ့ အရိပျအယောငျတှေ မွငျတှလေ့ာရပွီ။
ပရီးမီးယားလိဂျမှာရော VAR စနဈလိုနပွေီလား။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအဖှဲ့ခြုပျဥက်ကဌ စကူဒါမိုး Scudamore ကတော့ VAR စနဈဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မဖွဈမနေ ကငျြ့သုံးရမှာဖွဈတယျလို့ ဆိုခဲ့ပမေယျ့ ဒီရာသီမှာတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျစတငျတာ ပှဲစဉျ(၃)ပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ Controversial ဖွဈရပျတှကေတော့ ဆကျတိုကျ ထှကျလာပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ပှဲစဉျ (၃) ဝုလျဗျ-မနျစီးတီးတို့ တဈဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲတုနျးက ဝုလျဗျအသငျးနောကျခံလူ ဘိုလီ Boly ရဲ့ဂိုးက ဘောလုံးကို သိသိသာသာ လကျနဲ့ပုတျပွီး သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ဒိုငျလူကွီးက ဂိုးပေးခဲ့တယျ။ ဒီဖွဈရပျဟာ ရုတျတရကျဆိုရငျတော့ မသိသာပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ရုပျသံပွကှကျတှေ ပွနျကွညျ့ရငျ တျောတျောလေးကို ထငျရှားတယျ။ တကယျလို့ VAR စနဈသာရှိမယျဆိုရငျ ဒီဖွဈရပျကို ဂိုးအဖွဈ ပေးပါ့မလား။
အဲဒီပှဲမှာပဲ မနျစီးတီးကှငျးလယျ တိုကျစဈကစားသမား ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva ကို ဝုလျဗျကစားသမားတဈဦး ပယျနယျတီဧရိယာထဲမှာ သိသိသာသာကို ပွဈဒဏျကြူးလှနျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒိုငျလူကွီးက ပယျနယျတီ မပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီပှဲအပွီးမှာ VAR စနဈကို ကငျြ့သုံးသငျ့နပွေီလို့ တောငျးဆိုသံတှေ ထှကျလာတော့တာပဲ။ အဲဒီပှဲအပွီး နောကျတဈနေ့(တနင်ျဂနှေ)မှာ နယူးကာဆယျ-ခယျြလျဆီးပှဲ ကစားပါတယျ။ ခယျြလျဆီး ရရှိခဲ့တဲ့ ပယျနယျတီက အငွငျးပှားစရာဆိုပွီး နောကျခံစကားပွော Commentator တှကေ သုံးသပျခဲ့တယျ။ ရုပျသံပွကှကျတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျလညျး နယူးကာဆယျနောကျခံလူ ဖဘေီယနျရှား Fabian Schar ဟာ ဘောလုံးကို ရညျရှယျဖကျြထုတျခဲ့တာဖွဈပွီး လူကို မရညျရှယျခဲ့ဘူးဆိုတာ တှရေ့မှာပါ။ နောကျပွီး နယူးကာဆယျဘကျက သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးကလညျး အငွငျးပှားစရာပါပဲ။ နယူးကာဆယျ နောကျခံလူ ယကျဒျလငျ Yedlin ဟာ ခယျြလျဆီးတိုကျစဈမှူး ဂရြူး Giroud ရဲ့ မကျြနှာကို တံတောငျနဲ့ သိသိသာသာ ရိုကျခဲ့ပမေယျ့ ဒိုငျလူကွီးက ပွဈဒဏျဘော မပေးခဲ့လို့ ယကျဒျလငျက ဂိုးရှဖွေ့တျတငျ၊ အဲဒီဘောလုံးကို ဟိုဆေးလူ Joselu က ခေါငျးတိုကျ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျဟာ အခုမှ ရာသီအစပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အငွငျးပှားစရာ ဖွဈရပျတှကေတော့ ရှိလာပါပွီ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှဲ့ခြုပျကတော့ VAR ကို ဒီရာသီမှာ အသုံးမပွုသေးဖူးလို့ ဆိုထားလို့ နောကျထပျ အငွငျးပှားစရာ ဖွဈရပျတှကေ ဆကျဖွဈလာဦးမှာပါပဲ။ VAR ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မဖွဈမနေ အသုံးပွုဖို့ လိုနပွေီလို့ ယတိပွတျပွောလို့မရသေးပမေယျ့ Controversial ဖွဈရပျတှေ နောကျထပျ မရှိလာနိုငျဖို့အတှကျ VAR လိုအပျပါတယျလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . . .